Oligohydramnios ရေမြွှာရည်နည်းခြင်း - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်တော့်ဇနီးအသက် ၂၅နှစ်။ တတိယကိုယ်ဝန် ၃၄ပတ်ရှိနေပါပြီ။ အဲတာ အာထရာဆောင်းရိုက်တော့ ရေမွှာနည်းတယ်လို့အဖြေရပါတယ်။ ရေမွှာက အနည်းဆုံး ၈ ခုရှိရမှာ ၅ခုပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကလေးအနေအထားမှန်။ ပုံမှန်လှုပ်ရှားပါတယ်။ ရိုးရိုးမွေးလို့ရမလား ခွဲရမှာလား။ ရေမွှာနည်းခြင်းရဲ့အကျိုးအပြစ်များသိချင်ပါတယ်။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်မအသက် ၂၄ နှစ်၊ ကိုယ်ဝန် ၃၈ ပတ်ပါရှင်။ ကျွန်မ မနေ့က Ultrasound သွားရိုက်တော့ ရေမွှာရည်နည်းနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆရာ။ ပုံနှင့်တကွ ပို့ပေးထားပါတယ်ရှင်။ ဒီညနေ ( ၁၅. ၅. ၁၆) မှာ OG ရက်ချိန်းပြန်ပြတော့ OG က ကလေးခေါင်းလန်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်ဆရာ။ ရေမွှာနည်းနေတာနဲ့ ကလေး ခေါင်းလန်နေတာ စိုးရိမ်ရလားရှင်။ ကျွန်မက ရိုးရိုးမွေးချင်သူမို့ပါ။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ ညွှန်ကြားပြသပေးပါရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
၃။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက်က ၃၂ ပါ။ သားဦးကိုယ်ဝန်ပါ။ ကိုယ်ဝန်က ၃၅ ပတ်ပါဆရာ။ ဒီနေ့ဆေးခန်းပြတော့ ဆရာမက ဗိုက်ကတင်းပြီးကြပ်နေတယ်တဲ့။ ရေမွာလည်း နည်းနေတယ်။ အာထွာဆောင်းရိုက်ပြီး အခြေအနေကြည့်ရမယ်တဲ့။ ရေမွာကဘာကြောင့်နည်းတာပါလဲဆရာ။ စိုးရိမ်ရပါသလား။ ပြီးတော့ကလေးကလည်း အပေါ်မှာ အောက်ကို မဆင်းသေးဘူးတဲ့ဆရာ။
Amniotic fluid ရေမြွှာရည် ပုံမှန်ထက် နည်းနေတာကို Oligohydramnios ခေါ်ပြီး၊ ပုံမှန်ထက်များနေတာကို Hydramnios နဲ့ Polyhydramnios လို့ ခေါ်တယ်။
ကိုယ်ဝန် ၁၂ ပတ်မှာ Amniotic sac ရေမြွာအိတ်ဖြစ်လာတဲ့နောက် Amniotic fluid ရေမြွာရည်လည်းဖြစ်လာတယ်။ အစပိုင်းမှာ မအေဆီကနေရတဲ့ရေကနေ ရေမြွှာရည်ဖြစ်လာတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၂ဝ ပတ်နောက်ပိုင်းမှာ ကလေးရဲ့ ဆီးပါ ရောလာတယ်။ ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်မှာ ရေမြွာရည်ဟာ ၈ဝဝ စီစီကနေ ၁ဝဝဝ အထိရှိတယ်။ ၃၆ ပါတ်နောက် မွေးကာနီးရင် နဲနဲ နည်းလာတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၃၂-၃၆ ပတ်မှာ အရည်ထုထည် 500 စီစီထက် နည်းနေတာကို ရေမြွှာရည်နည်းတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ ကိုယ်ဝန် ၈% မှာ ရေမြွာရည် နည်းနေတတ်ပြီး၊ ၄% က Oligohydramnios အထိရောက်တယ်။ ကိုယ်ဝန် နောက်ဆုံး ၃ လမှာ အဖြစ်များတယ်။ ၁၂% က ရက်နောက်ကျပြီးမှ မွေးကြတယ်။ ကိုယ်ဝန်လစေ့ဆိုတာ ၃၉ ပတ်ကနေ ၄၁ ပတ်အထိကို ခေါ်တယ်။ ၄၂ ပတ်ကျော်သွားတာကို ရက်နောက်ကျမှ မွေးတာလို့ ခေါ်တယ်။
ဗိုက်စမ်းကြည့်ရင် သားအိမ်အမြင့်က ရှိသင့်တာထက် နိမ့်နေမယ်။ အထဲကကလေး အနေအထား တမျိုး ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေမယ်။ အပြင်ကနေစမ်းရင် ကလေးရဲ့ ခြေ-လက်စတာတွေက ပိုပြီးသိသာနေမယ်။ အာလ်ထွာဆောင်းရိုက်ပြီး Amniotic fluid index (AFI) တိုင်းရင်5to6cm ထက်နည်းနေမယ်။ Maximum vertical pocket (MPV) ကိုလဲ တိုင်းမယ်။ MPV ဆိုတာ သားအိမ်ထဲက အနက်ဆုံးနေရာမှာ ရေမြွှာရည်တိုင်းတယ်။2cm ထက်နည်းနေရင် ဒီရောဂါဘဲ။
ဘာလို့ဖြစ်သလဲ မသိတာကများတယ်။ များသောအားဖြင့် အထဲကကလေးရဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းစနစ် ချို့ယွင်းနေတာမို့ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ Bilateral renal agenesis (Potter's syndrome), Polycystic kidneys, Genitourinary obstruction တခုခု ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ Uteroplacental insufficiency ကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ မိခင်လောင်းက ရေဓါတ် နည်းနေလို့လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Angiotensin converting enzyme inhibitors ဆေးသောက်ရလို့လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မိခင်မှာ သွေးတိုးနဲ့ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်ကတည်းက ဆီးချိုရှိနေတာ၊ PET ကိုယ်ဝန်သွေးဆိပ်တက်တာ၊ သွေးတိုကျဆေး တချို့ကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ PROM ရေမြွာ စောပေါက်မယ်ဆိုရင် နည်းနေတော့မယ်။
၁။ Birth defects မွေးရာပါချို့ယွင်းတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ Facial distortion, Clubfoot, Pulmonary hypoplasia နဲ့ Amnion nodosum တခုခုဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ Potter syndrome ခေါ်တာဖြစ်မယ်။
၂။ Miscarriage ကိုယ်ဝန်ပျက်ဘို့ Stillbirth ကလေး အသေမွေးဘို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများတယ်။
- စောစောကတည်းကဆိုရင် မိခင်လောင်းကို ရေဓါတ်၊ ဆားဓါတ် ဖြည့်ပေးမယ်။ ရေ-အရည် များများသောက်စေရမယ်။
- မွေးကာနီးဆိုရင် Amniocentesis လုပ်ပြီး ဓါတ်ဆားရည်သွင်းပေးနိုင်တယ်။
- ကလေးဖွါးနေတုံးမှာဆိုရင် ချက်ကြိုးကိုအညှစ်ခံရလို့ ကလေးမှာ အောက်စီဂျင် အလုံအလောက်မရဖြစ်မယ်။ မွေးမွေးချင်း CPR လုပ်ဘို့ပြင်ထားရမယ်။ ပိုက်ငယ်လေးနဲ့ Amnio-infusion ဆားရည် သွင်းပေးနိုင်တယ်။ စိတ်ချရမှုကိုတော့ ငြင်းခုံနေဆဲ ဖြစ်တယ်။
- စောမွေးပေးရတာလဲ ရှိတတ်တယ်။ ဗိုက်ခွဲမွေးရလမ်း ရှိတယ်။ ဒေလီမှာနေရတုံးက ယမုန်နာဒုက္ခသည်ဆေးခန်းမှာ လူနာယောက်ကတော့ ရိုးရိုးမွေးခဲ့ပါတယ်။